संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्याang्गियर टापु पानीमुनि लोप हुन्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
ट्याang्गियर टापुको हवाई दृश्य।
छवि - Tangierisland-va.com
हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल वार्मिंग चुनौतिहरू मध्ये एक खम्बाको पग्लनेको परिणाम स्वरूप समुद्री सतह बढेको हो। हामी ब्लगमा नियमित रूपमा हेर्दै जाँदा, त्यहाँ धेरै शहरहरू छन् जुन शताब्दीको अन्त्यमा डुब्न सकिन्थ्यो, जस्तै भेनिस, ह Kongक Kong, ब्यूनस आयर्स वा स्यान डिएगो, तर त्यहाँ त्यस्ता टापुहरू छन् जुन पहिले नै हराइरहेका छन् ट्याang्गियर टापु.
संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिनियाको तटमा अवस्थित यो समुद्री कटावबाट पीडित छ। १ 1850० देखि यसले यसको दुई तिहाई जमिन गुमाएको छ र आउँदो 40० बर्षमा पूर्ण रूपमा हराउन सक्छ.
यस टापु, जुन ऐतिहासिक स्थानहरूको राष्ट्रिय दर्तामा सूचीबद्ध छ, यसको क्षेत्रफल २. square वर्ग किलोमिटर छ। यहाँ 450० बासिन्दाहरू बसोबास गर्छन्, जसमध्ये धेरै जसो धेरै पुस्तासम्म टापुमा रहेका छन्। ती मध्ये एक क्यारोल प्रुइट मूर हुन्, जो मछुवाहरूका पुरानो आफन्तहरूबाट आएका हुन्।
त्यतिखेर, यस टापुको अन्त्यबाट अन्तसम्म यात्रा गर्न उहाँलाई एक घण्टा लाग्यो; अब यसले केवल १० मिनेट लिन सक्दछ। "टाang्गियरलाई बचत नगर्नु त्रासदी हुनेछ," उनले भने सीएनएन। हास्यास्पद कुरा के छ भने विश्वको यस सानो भागमा धेरैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गर्छन् जब उनी भन्छन् कि जलवायु परिवर्तन मानिसबाट भएको होइन। कुल, उनले टापुमा% 87% भोट प्राप्त गरे।
डेभिड शल्ते, युएस आर्मी कोर्प्स अफ इन्जिनियर्सको साथ एक समुद्री जीवविज्ञानी, यसको विपरित सोच्दछन्: ग्लोबल वार्मिंगले ट्याang्गियरको कटाव रफ्तार बढाइरहेको छ। "पानी अहिले बलौटे रेती रेखा माथि प्रभाव गर्न पर्याप्त छ," उनले भने।
अन्य टापुहरू जस्तो छैन, Tangier एक डूब बालुवा पहाड हो। यसमा जैविक माटोको माटो छ तर यो एकदम नरम छ, त्यसैले एकपटक पानीले सिधा हिर्काउन सक्छ, यसले के गर्छ भने यसलाई मूल रूपमा टुक्रा टुक्रा पार्छ। यस प्रकार, अलि अलि गर्दै, यो अदृष्य हुन्छ जुन तपाईं यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ:
जलवायु परिवर्तनको बारेमा बासिन्दाहरूको धारणा जस्तोसुकै भए पनि, सबै जना सहमत छ कि भूक्षय रोक्न केही गर्नुपर्दछ। यस अवस्थाको सामना गर्दै, मेयर जेम्स एस्क्रिज दबाब दिइरहेका छन् नयाँ पर्खाल निर्माण गर्नुहोस् तिनीहरूलाई रक्षा गर्न। तर यस परियोजनालाई वास्तविकता बन्नको लागि वर्षौं लागिरहेको छ।
यस समयमा, यसले न त अधिक लिन्छ र न २० भन्दा कम लिन्छ। त्यस समयमा »यति धेरै क्षति भएको छ कि मूल परियोजनाले काम गर्दैन»उनले टिप्पणी गरे।
हामी के हुन्छ हेर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्याang्गियर टापु पानीमुनि लोप हुन्छ